Sweet Victory Video — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
bhaudhi • Chikunguru 28, 2015 pa 1:41 pm • pindura
SWEET KUKUNDA!!!!!!!!!!!! Love Jam ichi.
Natangwe • Zvita 18, 2015 pa 7:58 pm • pindura
Namibia Anoda iwe Fam '..
Nyasha dzake ngaave nemi mazuva ose oupenyu hwako murume.
kubva MAKAY • Chikunguru 28, 2015 pa 1:53 pm • pindura
Ndinoda rwiyo urwu. Ur unotikurudzira kwakadaro
Tiza • Chikunguru 28, 2015 pa 1:55 pm • pindura
Ndinokutendai rwendo nokuda kwokukuisirai rimwe Album nako kukudza Mambo wedu Wemasimbaose. Sweet Victory riri pedo uye nemwoyo wangu. Pandakauya kubhendi muna paneeli, TX, rwiyo urwu vainzwa akafanana kunamata rwiyo panguva konzati uye chii chikuru kunamata nguva zvakanga. Ramba tichirumbidza uye tichikudza naYe!!
Valerie • Chikunguru 28, 2015 pa 2:27 pm • pindura
DerrickMichaelWilliams • Chikunguru 28, 2015 pa 2:50 pm • pindura
Ndinokutendai rwendo Lee nokutendeseka kwako. this album vakandikurudzira panguva yakaoma zvikuru muupenyu hwangu. Uyu ndomumwe wangu nziyo kufarira pamusoro Album pamusoro. #SweetVictory
“Tositi kuna Mambo, tinoonga kuti pasirin'i, Achinzwa zvakanaka isu kweYangon 'kuti kusvikira kumugumo
You ndinzwei, holla kana uchinzwa ini, Isu tichiri achimhanya kunyange zvazvo isu achikamhina
Carlton • Chikunguru 28, 2015 pa 6:12 pm • pindura
Saka motokari kumiririra “Upenyu hwechiKristu” kana kuti kumiririra “Jesu”? Kana kuti kumiririra vose? Chero nzira, vhidhiyo ukandiendesa misodzi.
Carlton • Chikunguru 28, 2015 pa 6:13 pm • pindura
Keinya • Gunyana 7, 2015 pa 10:28 ndiri • pindura
Love vhidhiyo iyi. Yokufananidzira vakawanda mumatunhu! Ndinokutendai nokuti zvaunoita…chii Mwari anoita kuburikidza imi anorwadziwa wakanzwa.
ManuelAdams • Gunyana 16, 2015 pa 11:57 ndiri • pindura
Shoko vhangeri dingindira Kukunda kutambudzwa uye miedzo zviri saizvozvo chinodiwa nhasi. Munyengetero wangu kuti vanhu vakawanda kuchabatanidza zvinokosha roja vanoratidzwa ichi rwiyo uye Video. Mwari arambe kukukurudzira kuita matambudziko kuburikidza zvipo zvenyu.
Nick • Gunyana 18, 2015 pa 7:14 pm • pindura
rwendo, unofanira ini rinoitei mune zvizhinji nzira. Tinokutenda kuparadzira shoko raMwari kuvanhu vose. Ndinoda basa rako uye zvaunoda kutaura. Mwari komborera!
Leslie Dzvimbo • Mbudzi 6, 2015 pa 9:36 ndiri • pindura
Ramba inoshumira Trip!….mimhanzi yako iri kubatsira kuburikidza wangu pazvakanga nguva muupenyu hwangu. Soul okutsvaka. #simuka
Little Jerry • Ndira 10, 2016 pa 12:06 pm • pindura
Ndizvo Trip zvikuru,dai akanaka Ishe kuwedzera mashoko ake pakati penyu….Mwari ndiye simba renyu #RandomBars
Joanne • Kukadzi 12, 2016 pa 4:21 pm • pindura
Sweet Victory!!! Winter Jam 2016 Knoxville, TN. Havagoni kumirira kunamata nemi!
BrendaHohensee • Kukadzi 15, 2016 pa 11:46 ndiri • pindura
Ndakachema pokuona vhidhiyo iyi nokuti akandiita kufunga matambudziko ndakaenda kuburikidza rapera uye kuti akaramba kuipa asi kwete kurega uye pakupedzisira Jesu’ nyasha kundiponesa!!!
Jesudunsin Stephen • Kubvumbi 19, 2016 pa 2:10 pm • pindura
Wow,rwiyo yangu yakanakisisa
Kianna • Chivabvu 20, 2016 pa 4:12 pm • pindura
Pfungwa vhidhiyo iyi ndiyo relatable chaizvo. Ndainakidzwa kukaona.
Patrick • Chivabvu 23, 2016 pa 11:48 pm • pindura
Ndinoda chuna ichi soooo damn zvikuru! haagoni kuverenga replay Hits.
Jon Westra • Chikunguru 1, 2016 pa 2:43 pm • pindura
Ndicho chinhu rwiyo zvinoshamisa, usaswedera kwandiri zvakaipa, asi haana here kuti kushandisa shoko “ari **” kuti utsanangure?
KIANNA • Chikumi 26, 2016 pa 1:28 pm • pindura
murume, Ndakatora nguva kudzokorora mashoko enziyo rwiyo urwu. Regai ingotaurai Ndinoda shoko shure rwiyo. Mukuru kukunda rufu kuti Kristu akafira. Ehe, akafa asi akamuka nesimba rose. Trip LEE, Mwari vakuropafadzei!!!!!!!!!!!!!
JordanLivada • Mbudzi 21, 2017 pa 9:58 pm • pindura
DOPE!!! saka zvikuru, Mwari sooooooooooo zvakanaka. Akaropafadzwa uyo anouya muzita raIshe! :) Wow, regai kuziva kana uchida minyengetero, munhu. :) Achapindura!